မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးအသင်း ပိုင်ရှင်များ သိန်း သောင်းချီရှုံး | ဧရာဝတီ
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးအသင်း ပိုင်ရှင်များ သိန်း သောင်းချီရှုံး
သာလွန်ဇောင်းထက်| November 10, 2012 | Hits:1
| | ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနေရှယ်နယ်လိဂ် ချန်ပီယံဖလားကို ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်က ရရှိခဲ့ပြီးနောက် အသင်းပိုင်ရှင် ဦးတေဇနှင့် သား ပြည့်ဖြိုးတေဇတို့က အသင်းသားများနှင့်အတူ အောင်ပွဲခံနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်)
မြန်မာနိုင်ငံ ထိပ်တန်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ပိုင်ဆိုင်သော မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံး အသင်းများမှာ နှစ်စဉ် ငွေကျပ်သိန်း သောင်းချီ အရှုံးပေါ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲ (Myanmar National League) များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ထိပ်တန်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများက ဘောလုံးအသင်းများ အပြိုင်အဆိုင် တည်ထောင်ခဲ့ကြပြီး ယခု ၃ နှစ်ကျော် ကြာမြင့်လာချိန်တွင် ဘောလုံးအသင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ငွေ နှစ်စဉ် သိန်းသောင်းချီ အရှုံးပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု အသင်းပိုင်ရှင်များထံမှ သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကိုယ်စားပြု ဇေယျာရွှေမြေ အသင်းပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ၀ယ်ရေးဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်သူ ဦးဝင်းမြင့်က အသင်းအတွက် လစဉ် သိန်းရာချီ အသုံးပြုနေရပြီး အသင်းစတင်တည်ထောင်ချိန်မှ ယခုအချိန်အထိ သိန်း ၃ သောင်းကျော် အသုံးပြုထားပြီး ယင်းငွေကြေးများမှာ စိုက်ထုတ်သုံးစွဲထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အကျိုးအမြတ် မရရှိကြောင်း ဧရာဝတီသတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတခုတွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
“တလကို သိန်း ၆၀၀ လောက်ရှိမယ်။ ဘောလုံးပွဲနိုင်လို့ရှိရင်လည်း တပွဲကိုသိန်း ၅၀ ဆုချတယ်။ အခြားအသင်းတွေဆိုရင် တပွဲနိုင်ရင် သိန်း ၁၀၀ လောက်ပေးကြတယ်။ အခုအထိဆိုရင် အသင်းအတွက် သိန်း ၃ သောင်းကျော်လောက် ရှိမယ်” ဟု ဦးဝင်းမြင့်က ဆိုသည်။
ဦးအောင်ကိုဝင်း ၊ ဦးတေဇ၊ ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်း၊ ယုဇန ဦးဌေးမြင့်၊ ဦးတင့်ဆန်း အပါအ၀င် တခြားသောထိပ်တန်း စီးပွားရေး လုပ်ရှင်ကြီးများမှာလည်း ဘောလုံးအသင်းများအတွက် ဆုကြေး၊ အပါအ၀င် ကုန်ကျစရိတ်များစွာ အသုံးပြုနေရကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးသမားများ၏ လစာမှာ အနည်းဆုံး ၅ သိန်းဝန်းကျင်မှ သိန်းဆယ်ဂဏန်းချီရှိနေပြီး ACE ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်ရှင် ဦးတင့်ဆန်းပိုင်ဆိုင်သော နေပြည်တော်အက်ဖ်စီ ဘောလုံးအသင်းတွင် ဘောလုံး အားကစားသမားများအတွက် ဇိမ်ခံကားများ ၀ယ်ယူပေးသည်အထိ အကုန်အကျခံ လုပ်ဆောင်ပေးကြသည်ဟု သိရှိရသည်။
အကျိုးအမြတ် နည်းပါးလွန်းလှသည့် လုပ်ငန်းအပေါ် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများက ငွေကြေးများစွာ အရှုံးခံ စိုက်ထုတ် သုံးနေရခြင်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြား ဂုဏ်သိက္ခာ ပြိုင်ဆိုင်မှုပုံစံမျိုး ရှိသည်ဟု သုံးသပ်မှုများရှိသည့်အပြင် တိုင်းပြည်နှင့် ဘောလုံး ချစ်သောကြောင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မှုများရှိသည်။
“ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရော၊ ဘောလုံးအသင်းတွေကရော အကျိုးအမြတ်မရှိတဲ့ Professional လုပ်ငန်းကြီးတခုကို နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ဖို့အတွက် လုပ်ကိုင်နေတယ် ဆိုတာတော့ မငြင်းသာပါဘူး။ Income က ဘာမှ မရှိဘူး။ လစာတင်ပဲ တလကို သိန်းရာချီပေးရတယ်။ ပွဲတွေကလည်း ပရိသတ်မရှိတော့ ပရိသတ်ဆီက ရတဲ့ဝင်ငွေက နည်းနည်းလေးပဲရတယ်။ တနှစ်ကို သိန်းပေါင်း သောင်းချီသုံးနေရတော့ အခုချိန်မှာ အော်လာပြီပေါ့။ သူဌေးကြီးတွေက ဒီအရှုံးကို ခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိလို့ပေါ့” ဟု အားကစားအယ်ဒီတာ ကိုဇော်သက်ထွေးက ဆိုသည်။
အားကစားကလောင်ရှင် ဦးခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား) ကမူ မြန်မာနေရှယ်နယ်လိဂ် ဘောလုံးအသင်းများ ငွေကြေး ဆုံးရှုံးမှုများရခြင်းမှာ ငွေသုံးကြမ်းခြင်းကြောင့် ဟုဆိုသည်။
“အစောပိုင်းက ငွေသုံးတော်တော်ကြမ်းကြတယ်။ ငွေသုံးတော်တော်လေးကြမ်းတော့ ဘောလုံးသမားရဖို့ အပြန်အလှန် ကြေးပြီးခေါ်တာ။ ပွဲတပွဲနိုင်ရင် သိန်း ၁၀၀ တို့ အလွတ်ကြီး ဆုချတာတို့ အဲလို အသုံးကြမ်းတာတွေကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ စစ်စစ်စီစီနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဘောလုံးအသင်းတွေအတွက် ခံသာမှာပါ။ ဒီအတိုင်း သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အရှုံးများနေတဲ့အပြင် စီးပွားရေးတွေကလည်း အပြိုင်အဆိုင် လုပ်ရတော့မှာဆိုတော့ သူတို့ဘက်မှာလည်း အကြပ်အတည်းရှိတာ အမှန်ပဲ” ဟု ဦးခင်မောင်ထွေးက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးစိုးမိုးကမူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများသည် နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်နှင့် ဘောလုံးချစ်စိတ်များဖြင့် တိုင်းပြည်အတွက် ငွေကြေးစိုက်ထုတ် ကုန်ကျခံနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့၊ ဘောလုံးကိုလည်း တကယ်ချစ်လို့၊ ဘောလုံးကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးချင်လို့ အသင်းပိုင်ရှင်ကြီးတွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေက အသင်းကို တည်ထောင်ပေးနေတာပေါ့။ သူတို့အတွက် ဘာအကျိုးမှမရှိဘူး။ တခြား နိုင်ငံတကာလိဂ်တွေလို စပွန်ဆာတွေလည်း အများကြီးရတာ မဟုတ်သေးဘူး။ ကစားသမား အရောင်းအ၀ယ်တွေဆိုတာလည်း အချင်းချင်းပဲ လှည့်ရောင်းနိုင်တဲ့ အဆင့်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်”ဟု ဦးစိုးမိုးက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ကို အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့်၏ တောင်းဆိုမှုအရ မြန်မာခရိုနီ သူဌေးကြီးများက လိုက်လံလုပ်ဆေင်ပေးခဲ့သည်ဆိုသော သုံးသပ်ချက်မှုများလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ကြောင့် မြန်မာ့ဘောလုံး အရည်အသွေး ပြန်လည်မြင့်မားလာသည်ဟု ပြည်တွင်း အားကစားအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆိုကြသည်။
“သုံး၊ လေးနှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းက ခြေတက်လာပြီးတော့ ဒေသတွင်းမှာ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှားတို့၊ စင်ကာပူတို့နဲ့ သူတင်ကိုယ်တင်ကစားလာနိုင်တဲ့ အနေအထားလေးတရပ် ရှိလာတယ” ဟု ကိုဇော်သက်ထွေးက ပြောသည်။
ဦးခင်မောင်ထွေးကလည်း မြန်မာ့ဘောလုံး အာရှတွင် အဆင့်အတန်းမြင့်မားရေး လမ်းစပေါ်ထွန်းနေပြီဟု ဆိုသည်။
“အပျော်တမ်းအဆင့်ထက်တော့ တိုးတက်လာတာပေါ့။ ၁၉၅၀၊ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းက အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဘောလုံးက ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတယ်။ အဲဒီကနေ ပြန်ကျသွားတာ၊ ၈၀၊ ၉၀ မှာ ပြန်ကျသွားတာ။ ကျရာကနေ ပြန်တက်သွားရတာဆိုတော့ အရင်အဆင့်တော့ မရောက်သေးဘူး။ တိုးတက်တယ်။ ဘောလုံး အဆင့်အတန်းကလည်း တိုးတက်တဲ့ လမ်းစပေါ်ရောက်ပြီလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်” ဟု ဦးခင်မောင်ထွေးက ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် အသင်းများ အရှုံးခံမှုများ သက်သာစေရန်မှာမူ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စပွန်ဆာများ ပြည်တွင်း ဘောလုံးလောကအတွင်း ၀င်ရောက်လာမှသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အားကစားကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ်ကြသည်။
ထူးကုမ္ပဏီမှ ဦးတေဇက ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း၊ ယုဇနကုမ္ပဏီမှ ဦးဌေးမြင့်က ဆောက်သမ်းမြန်မာယူနိုက်တက် (Southern Myanmar United)၊ ACE ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ ဦးတင့်ဆန်းက နေပြည်တော်အက်ဖ်စီ၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ကိုဝင်းက ကမ္ဘောဇအက်ဖ်စီ အပါအ၀င် မြန်မာနေရှယ်နယ်လိဂ် စတင်တည်ထောင်စဉ်က ဘောလုံးအသင်း ၈ သင်းသာရှိသော်လည်း ယခုအခါ ဘောလုံးအသင်း ၁၄ သင်းအထိ ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
Yangonite November 10, 2012 - 9:32 am Look at the namelist of those owners. All who’s who in the previous thuggish regime. All of them benefited massively from cronyism and nepotism with total disregard for rules and regulations for more than two decades. When your country’s GDP is ranked even lower than many African countries (the lowest in ASEAN too) and yet you are super-rich due to exploitation of natural and human resources of that country, that showsalot about your character no matter what they may spout about patriotism and nationalism. And they still dominate and monopolize the Burmese economy today. So let’s just say they are repaying their debts to Burmese people albeit inanot so effective way.
Reply pn wara November 10, 2012 - 2:44 pm မြန်မာဘောလုံးအသင်းတွေက ဘောလုံးနဲ့စီးပွားမဖြစ်ဘူးဆိုသိတာပေါ့- တခြား ရလမ်း-ရပေါက်တွေရှိလို့ ဒီလိုအသင်းကြီးတွေ တည်ထောင်ပြီး လှုပ်ရှားနေကြတာပါ-သစ်ထုတ်လုပ်တာ- ကျောက်မြက်တူးဖေါ်တာ- ကားတင်သွင်းတာ- ဆီတင်သွင်းတာ-စတဲ့ စတဲ့ အမြတ်ငွေ သ်ိန်းပေါင်း ထောင်သောင်းချီ ၀င်ပေါက်တွေ နဲလားဗျာ- ဟန်းဖုန်းတလုံး သူများနိုင်ငံမှာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်ပေးလျှင် ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ မြန်မာသူဌေးကြီးတွေက ဟန်းဖုံးတလုံး မြန်မာငွေ သိန်းလေး-ငါးဆယ်(ဒေါ်လာ ၂ထောင်ခန့် ) ပေးဝယ်နေရတယ်။ အင်တာနက်လဲ ထို့ အတူဘဲ- ကဲ အခွန်မဆောင်ရဘဲ ရတဲ့ အမြတ်ငွေတွေ နဲလားဗျား- သတင်းရေးပုံက ဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင်ကြီး တွေ အရှူံးကာမိအောင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဘဲ ထောက်ပံ့ရမည့်ပုံ-
Reply pps12345 November 10, 2012 - 3:16 pm ယခင်ကလို ပြည်က တစ်ကျပ်နှင့် ဝယ် အစိုးရကို ၆ကျပ်နှင့်ပြန်ရောင်း၊ ပြည်တွင်းမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ယူ ပြီးရင် တစ်ပြားမှ မစိုက်ပဲ ပြည်သူထဲကငွေနှင့် လည်ပတ်ပြီး ပြည်သူကို ဈေးကြီးပေးပြီးပြန်ရောင်း၊ ပါမစ်ဆိုတာကို ယူ ပြိးရင် ထပ်ခါတလဲလဲသုံး၊ ဒီလူတွေ ဘော်လုံးကွင်းထောင်တယ်ဆိုတာကလည်း ပြည်သူတွေသူတို့ကို အမြင်ကတ်တာ များလာလို့ ပြန်ကာမိအောင်လုပ်တ်ာပဲ။ ဘော်လုံးသမားတွေရေ သူတို့ငွေဆိုတာလည်း တိုင်းသူပြည်သားတွေဆီက မတရား ရယူထားတဲ့ငွေတွေပါပဲ။ သုံးတာသုံးအားမနာနဲ့။ သူတို့ ရာဇဝင်ကို လှန်လိုက်ရင် အရင်တုံးက ဘာကောင်တွေလဲဆိုတာသိရလိမ့်မယ်။
Reply Ngaba November 11, 2012 - 3:04 am ဘောလုံးအသင်းထောင်ဖို့ သက်သက်… ရှယ်မြေကွက်တွေ … တကယ့် အခွင့်ထူး လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေက သိန်းပေါင်းသိန်းချီမက ရထားတာပါ…
Reply ဒို့ဗမာအောင်ရမည်။ November 14, 2012 - 10:13 am ၁။ကုန်ကျသွားတဲ့ငွေနဲ့ရည်မှန်းချက်ရလဒ်အကျိုးကိုချင့်ချိန်မှုရှိမရှိအရင်သုံသပ်ပါ
ရှေ့ရဲရဲထွက်ရင်ကော့ပြီးဆောင်ရွက်ပါ။for show ကိုတော့ရှောင်ပါ။